Real Madrid Oo Kulankii Lixaad Oo Isku Xiga Badisay & Atletico Oo Ay Hogaanka La Liga La Qabteen | Laacibnet.net
Real Madrid Oo Kulankii Lixaad Oo Isku Xiga Badisay & Atletico Oo Ay Hogaanka La Liga La Qabteen
December 23, 2020 Balaleti
Real Madrid ayaa hogaanka La Liga la qabatay kooxda Atletico Madrid ka dib markii ay 2-0 ku suuldaareen kooxda Granada oo marti ugu aheyd garoonkooda ku meel gaarka ah ee Alfredo di Stefano, iyagoo gaaray guushii lixaad ee isku xigta.
Los Blancos ayaa guushaan uga mahadcelineysaa Casemiro oo dhaliyay goolkoodii 6200aad ee La Liga iyo Karim Benzema oo gool labaad ku soo xiray waqtigii dhimashada ciyaarta laakiin guushaan waxaa hareeyay dhaawac soo gaaray Rodrygo kaasoo laga dhex qaaday garoonka.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si dardar leh iyadoo Granada ay ilbiriqsiyadii ugu horeysay ku dhawaatay inay hogaanka qabato markii uu Soldado kubad u dhigay Puertas laakiin kubadii goolka loo fishay wuxuu dulmariyay shabaqa.
Dhan daqiiqo intii aan la gaarin Benzema ayaa isna fursad fiican helay isagoo hogaanka u dhiibi karay Los Blancos laakiin kubadiisa waxay ku dhacday shabaqa dhinaciisa.
Nusa saac markii ay socotay ciyaarta Carvajal iyo Varane ayaa fursado isku xiga Real Madrid u abuuray iyadoo daafaca midig kubad laga celiyay ka hor inta uusan daafaca dhexe kubad madax aheyd ku sigin shabaqa.
Daqiiqadii 38aad Real Madrid musiibo ayaa u soo hooyatay markii Rodrygo uu dhaawac halis ah soo gaaray isagoo bareelo looga saaray garoonka waxaana bedelay Marco Asensio.
Qeybtii labaad ee ciyaarta Real Madrid ayaa sarre u qaaday ciyaarteeda iyagoo qarka u fuulay inay hogaanka u qabtaan ciyaarta daqiiqadii 56aad markii Marco Asensio uu birta garaacay. Waxay noqon laheyd guul qurux badan laakiin birta ayaa soo beenisay.
Daqiiqadii ku xigtay goolhayaha Granada ayaa kubad halis aheyd ka badbaadiyay Valverde iyadoo Los Blancos ay dardar xoog leh muujineysay.
Ugu danbeyn Real Madrid ayaa heshay goolkii ay raadineysay daqiiqadii 58aad. Asensio ayaa kubad karoos cajiib ah soo dhigay, waxaana u kacay oo madax ku dhaliyay Casemiro isagoo aan wax fursad ah siinin goolhaye Silva.
Casemiro ayaa dhaliyay goolkii 6200aad ee ay Real Madrid ka dhaliso horyaalka La Liga. Xiddiga reer Brazil ayaa shabaqa soo taabtay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee uu ku ciyaaray gurigooda.
Labo daqiiqo goolka ka dib, Granada ayaa isku dayday inay jawaab ka bixiso goolka laakiin waxaa badbaadin fantastik ah sameeyay goolhaye Courtois oo celiyay fursadii halista aheyd ee Puertas.
Karim Benzema ayaa waqtigii dhimashada ciyaarta ee daqiiqadii 4aad ee waqtiga dheeriga ahaa Los Blancos u saxiixay gool labaad oo ciyaarta dilay.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 2-0 oo ay Los Blancos ku suuldaartay kooxda Granada.
Tababare Thomas Tuchel Oo Magacaabay Xiddigii Aamusiyay Bruno Fernandes Kulankii Shalay Ee Stamford Bridge
Real Madrid Oo Uga Sii Daraysa Xaaladdii Liverpool Ee Qasnayd & Xiddiga Ay Ka Doonayso